Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Frontier Airlines ny fitandremana 70 fiaramanidina rehetra ao amin'ny andian-tsambo
Frontier Airlines ny fitandremana 70 fiaramanidina rehetra ao amin'ny andian-tsambo
Jona 12, 2008
NEW YORK - Nilaza ny Frontier Airlines fa hitahiry ny fiaramanidina 70 rehetra ao anaty fiaramanidina izy ary mandoa vola mba hitazomana ny fifanarahana fifanarahana ara-bola sy ara-bola.
Ny Frontier Airlines Holding Inc. monina any Denver, izay tompon'ny mpitatitra, dia nangataka fiarovana amin'ny fatiantoka ny banky toko faha-11 tamin'ny volana aprily. Nahazo nampiato ny fandoavam-bola amin'ny fiaramanidiny mandritra ny 60 andro ny mpitatitra aorian'ny fametrahana azy saingy avy eo tsy maintsy nanapa-kevitra izy ireo raha hihazona ireo fampanofana sy fifanarahana.
Nilaza ny mpitondra tenin'ny Frontier Steve Snyder fa tsy maintsy nandoa ny onitra ny kaompaniam-pitaterana raha afaka naka ny fiaramanidina ilay mpampindram-bola. Tsy nety nilaza izy hoe ohatrinona ny karaman'ny mpitatitra raha te-hahatratra ny daty.
Frontier dia manana fiaramanidina 22 an'ny Airbus ao anaty fiaramanidina ary manofa 38. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka koa dia manana fiaramanidina Bombardier Q-10 turboprop 400. Dimy no fananan'ny Frontier ary ny dimy ampanofana.
Tamin'ny herinandro lasa teo, nilaza ny Frontier fa nanaiky ny karama vonjimaika sy ny tombotsoan-tsoa natao ho fanampiana ny orinasa hivoaka amin'ny fiarovana ny bankiropitra ny mpikambana ao amin'ny Unionsters Union. Nilaza ny mpitatitra monina ao Denver fa ny mekanika dia manodidina ny 430 mekanika, mpiasa ao amin'ny efitrano fampiasa ary ny hafa.
Ireo sendika misolo tena ny mpanamory fiaramanidina sy mpaniraka an'ny Frontier dia nanaiky ny famahana tamin'ny volana lasa. Nilaza ny zotram-piaramanidina fa nanaiky ny fanapahana hatramin'ny 20 isan-jato ny Lehiben'ny mpanatanteraka Sean Menke sy ireo mpitantana hafa.
Tamin'ny fikatsahana ny fiarovana ny fatiantoka dia nilaza i Frontier fa ny processeur an'ny carte de crédit First Data Corp. dia nitady hitazona hatramin'ny 100 isan-jaton'ny vola azo tamin'ny fivarotana tapakila mandra-pahavitan'ny sidina. Ny Data voalohany dia nitazona 50 isan-jato.
Ny Frontier sy ny First Data dia nahatratra fifanarahana vaovao momba ny fikirakirana ny vola azo avy amin'ny varotra tapakila saingy tsy namoaka ny antsipiriany.
Ny mpitatitra koa dia sahirana amin'ny vidin'ny solika sy ny fifaninanana mahery setra any Denver.